Todays Nepal News (TNN) » भ्यालेन्टाइन : भ्रम र यथार्थ !
उनलाइ शहरमा कसैले नलगाएको न्यू ड्रेस चाहिन्छ र अनी कसैले नकिनेको अट्र्याक्टिभ गिफ्ट र रोज पनि चाहिन्छ रे । यति मात्रै होइन उनले यसपटकको भ्यालेण्टाइन नाइटका लागि कुनै पाँचतारे होटेललाई छानेकी छिन । यसपटक भ्यालेन्टाइन खर्च ५० हजार हुने भएको छ । तर, शहरमा बाँच्नका लागि संघर्ष गर्दै आइरहेको म ठिटोलाइ ५० हजारको रकम जुटाउदै गार्हो छ । फेरी बल्लबल्ल बनेकी प्रमिका नै फूत्केलिन भन्ने डर छ । हे ! भ्यालेण्टाइन तिम्रो सम्झनामा मनाइने यो प्रेम दिवसले मलाइ त सिध्याउने नै भयो, शहरका कुनै एक युवकको भ्यालेन्टाइन कल्पना हो यो ।
उनको नाम गिरिज हो । उनको एक प्रेमिका छिन् । नाम उल्लेख गर्दिन । यसअघि एउटा प्रेमिकाले तीन बर्षसम्म ‘लभ’ गरेर अर्केस‍ँग विवाह गरेर विदेशतिर लागेपछि रन्थनिएको गिरिजले भेट्टाएको नयाँ सहारा अहिलेकी प्रेमीका हुन् । त्यैले होला, गिरिज यिनीमै आफ्नो स‍ंसार देख्छ । नयाँ प्रेमिकासँग भ्यालेनटाइन डे उत्साहका साथ मनाउने तयारीमा छ, गिरिज ।
शहरमा भ्यालेनटाइनको रौनक छाउँदै गर्दा जीवन नै अस्थायी ठान्ने मदनजस्ता अर्का पात्रलाई भने यो दिनको छुट्टै अनुभव छ । मदनलाई प्रेम भन्ने चिजमा विश्वास नै थिएन रे । तर, केही समय यता उनी आफैसँगै एमबीबीएसको तयारीमा रहेकी दिब्यासँगको न्यानो काखमा चुर्लम्मै डुबेपछि भ्यालेण्टाइने कतिखेर छोयो पत्तै भएन रे । जे होस गिरिज र मदनजस्तै अधिकांश शहरीया थुप्रै युवा युवतीलाई नजीकिँदै गएको प्रणय दिवसको प्रेममय भावले उद्धेलित बनाएको छ ।
सेक्सपियरले अघि सारेको रोमियो/जुलिएट अनि मुमताज र शाह जाँहले पनि प्रेम गरेका थिए तर त्यो ब्यक्त होइन अब्यक्त थियो । शाह जाँहले आफ्नी प्रेमिकालाई पसलमा सजाइएका महंगा गुलावी फूलहरु उपहार दिएर प्रेमलाइ बलियो बनाएका थिएनन । नत जा शाह मुमताजलाइ लिएर कतै डेटिङनै गएका थिए । तर, विडम्वना या हो कि, त्यो बेला यस्तो सुविध थिएन । यो त प्रेम किन्न सक्नेको समय हो । जोसँग धैरे पैसा हुन्छ उसैसँग महंगो प्रेम हुन्छ भन्ने आजको समयको परिभाषा बनिसकेको छ । के हो भ्यालेन्टाइन डे ? किन मनाइन्छ यो ? यसबारे केही प्रचलित किम्बदन्तीहरु पेस गरिएको छ । जुन भ्यालेनटाइन डे मनाउन उत्सुकहरुका लागि उपयोगी हुने आशा छ ।
कहिलेबाट मनाउन थालियो भ्यालेनटाइन डे ?
सेन्ट भ्यालेण्टाइनलाई सम्झदैँ १९ औ शताब्दीमा रोमबाट भ्यालेण्टाइन दिवस मनाउन थालिएको हो । रोमन पादरी भ्यालेनटाइनले जेलमा परेका कैदीहरुलाइ इशापूर्व २ सय ७८ मा सामूहिक विवाह गराई दिएपछि तत्कालिन रोम सम्राट क्लोडिअस द्धितीयले क्रुद्ध हुँदै पादरी भ्यालेण्टाइनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको दिनको सम्झनामा संसारका प्रेमीहरुले यस दिवसलाइ मनाउने गरेका छन् । क्रुर शासक क्लोडिअसले आफ्नो शासनमा अनगिन्ति हिंसाका घटनाहरुमा संलग्न रहेको इतिहासमा उल्लेख छ । यतिसम्मकी आफ्ना सैनिकहरुलाई क्लोडिअसले कहिल्यै बिदा नदिने जसका कारण सैनिकहरु आफ्ना प्राणभन्दा प्यारी प्रेमिका र श्रीमतिसँग भेट गर्न छट्पटाइरहेको अबस्था हुन्थ्यो । भ्यालेन्टाइनको हत्यापछि सम्राट क्लोडिअसको शासनबिरुद्ध सिंङ्गो रोम साम्राज्यमा विरोध भयो र यसको परिणामस्वरुप रक्लोडिअसको शासनको अन्त्य हुँदै प्रेमका पुजारीहरुको बिजय भयो । यसरी एक पादरीजस्तो पवित्र कार्यमा संलग्न ब्यक्तिको नै हत्या भएपछि यसको रोम साम्राज्यमा व्यापक विरोध र प्रेमका पक्षमा ब्यापक समर्थन जुट्दै गएको थियो र विस्तारै संसार नै प्रेम हो भन्ने नाराका साथ सेन्ट भ्यालेन्टाइनलाइ अमर तुल्याउन १४ फेब्रुअरीलाइ विशेषरुपमा मनाउन थालिएको हो ।
भ्यालेन्टाइन पश्चिमा संस्कृति भएपनि संसारलाइ प्रणय सूत्रको सन्देश सिकाउनु कुनै नराम्रो कार्य अबश्य होइन् । संसारमा हत्या, हिंसा र मानवीयताको खडेरी परिरहेको समयमा प्रेमको भाव फैलिनु अत्यन्तै सुन्दर पक्ष हो । प्रेम विश्वास हो, प्रेम जीवन जीउने आधार हो अनि प्रेम एक सुन्दर रचना हो । यसकारण, प्रेमको कुनै खराबी देखिदैनन् । न त प्रेम भन्ने शब्द आफैले कुनै अशोभनीय अर्थ बोकेको छ ।
एकपटक गहिरिएर सोच्ने हो भने प्रेमबिनाको संसार साँच्चिकै असम्भव छ । मानिसले जीवनमा जस्तोसुकै सफलता हासिल गरेपनि , जस्तोसुकै पदमा पुगेपनि उसँगै प्रेमका अनुभुतिहरुले पनि अंकमाल गरिरहेका हुन्छन् । प्रेम अनुभुतिको खाँचो मानिसलाई मात्रै होइन पशुलाई पनि हुन्छ । प्राणीहरु पनि अब्यक्त प्रेम गरिहेका हुन्छन् । यसकारण प्रेम समस्त ब्रमाण्डमा अटाइरहेका हरेक सजीव भावनाहरुको एक साझा बिशेषता हो । जुन सबैलाइ आबश्यक छ र सबैलाइ खाँचो छ ।
भ्यालेनटाइन डे ७ फेब्रअरीबाछ शुरु हुन्छ । ७ फेब्रुअरीबाट १४ फेब्रुअरीसम्म हरेक दिनका आआफ्नै महत्व छन् ।
भ्यालेनटाइन सप्ताहको महत्व के छ ?
७ फेब्रुअरी : यो दिनलाइ फुल डे अर्थात रोजडेका रुपमा मनाइन्छ । यो दिन आआफ्नो प्रेमीलाइ वा मन पराएकोलाइ रातो गुलाव दिएर आफूप्रति आकषिर्त गर्ने गरिन्छ । हिटलरले पनि आफ्नी प्रेमिका इभालाइ ७ फेब्रुअरीमा रातो गुलाव उपहार दिएको किम्वदन्ती छ ।
८ फेब्रुअरी : ८ फेब्रुअरीलाइ प्रपोज डेकोरुपमा मनाइने गरिन्छ । यो दिन आफूलाइ मन परेको मान्छेसंग निर्धक्क प्रम प्रस्ताब राख्ने गरिन्छ । यदि तपाइको दिलमा कोही छ भने यो दिन ढुक्कस‍ँग प्रेम प्रस्ताब राख्न सक्नुहुन्छ ।
९ फेब्रुअरी : ९ फेब्रुअरीलाइ चकलेट डेकोरुपमा मनाइन्छ । यो दिनमा आफूलाई मन परेको मान्छेलाई मिठो खुवाएर भावनात्मकरुपमा नजिक हुन सकिन्छ । मीठो खानेकुरासँगै माया पनि झाँगिदै जाने विश्वास छ । स्वादिलो चकलेटले मायालाइ अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास गरिन्छ ।
१० फेब्रुअरी : १० फेब्रुअरीलाइ टेड्डी डे को रुपमा मनाइने गरिन्छ । टेडि एकदमै नरम र मुलायम खालको हुन्छ । यसलाइ माया कोमल हुने भएकाले कोमलताको प्रतिकका रुपमा टेड्डी गिफ्ट दिने गरिन्छ ।
११ फेब्रुअरी : ११ फेब्रुअरीलाइ प्रोमिस डेकारुपमा मनाइन्छ । यो दिन आफ्नो मायालुसँग प्रेमलाई सधै सार्थक पार्ने कसम खाइन्छ । अर्थात्, मायामा विश्वासको कदम बलियो बनाउने यो विशेष दिन हो । जीवनभर अटुट साथ दिने वाचा जोडीहरुले यस दिन खाने गर्दछन् ।
१२ फेब्रुअरी : १२ फेब्रुअरी हग डे हो । यो दिन न्यानो आलिङ्गनमा बाँधिएर प्रेमीहरुले आफ्नो प्रेमको गहिरो अनुभुति ब्यक्त गर्ने गर्दछन । यो दिन तपाइले आफ्नो प्रेमिलाई जाँच्ने दिन पनि हो । उसले कति टाइट हग गर्छ यसबाट प्रेमप्रतिको समर्पण मापन गर्ने गरिन्छ । प्रेमीले यदि टाइट हग गरेन भने बुझ्नुस् कि त्यो प्रेम झुटो हो । अनि, आलिंगनमा बाँधिदा तपाइँको प्रेमीको धड्कनमा एक प्रकारको सान्त भाव पाउँनु भयो भने त्यो प्रेम साँच्चीकै अमर हो भनेर बुझ्नुहोस् ।
१३ फेब्रुअरी : फेब्रुअरी १३ एक महत्वपूर्ण दिन हो । यसलाई किस दिवस् अर्थात् चुम्बन दिवसका रुपमा मनाइने गरिन्छ । यसदिन आफ्नो प्रेमिलाई यहाँले मायाको जादु देखाउन सक्नुहुन्छ । यस दिनमा आफ्नो मायालुलाई सुमधुर चुम्बन गरेर आफ्नो अपार माया ब्यक्त गर्न सकिन्छ ।
१४ फेब्रुअरी : यो अन्तिम तथा बिशेष दिन हो अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे । यसअघि मनाइएको सबै दिनको स्वादसँगै चाख्ने दिने हो यो । यो दिनमा प्रेमीहरुबीच रहेका तीतामीठा सबै भावना खुलस्त एकअर्कालाइ भनेर सेतो पर्दाजस्तो सफा हृदय बनाउनुपर्ने हुन्छ । यस दिनलाई यादगार बनाउन कुनै महंगो उपहार होइन् कुनै अर्थपूर्ण उपहार आफ्नो प्रेमीलाई दिनुहोस् जसले तपाइँको प्रेमलाइ सधै ताजा बनाई राखोस् । कुनै नव प्रेमीले आफुले मन परेको मन्छेलाइ जे जस्तो प्रतिक्रिया आएपनि प्रेमको प्रस्ताब राख्ने यो एक उत्तम दिन हो । यो दिन जो सुकैलाइ प्रेम प्रस्ताब राख्न खुल्ला छ । तर कसैलाइ परिक्षण गर्ने गरि र कसैलाइ होच्याउने ढंगले प्रेम प्रस्ताब भने नराख्नुहोस । भित्री मनदेखी चाहनु हुन्छ भने मात्रै प्रेम प्रस्ताब राख्न सक्नु हुन्छ । यो दिनलाइ अत्यन्नै स्मरणीय बनाउनुहोस यो दिन सकेसम्म पहिलो भेटमा रातो गुलाव दिएर माया ब्यक्त गर्नुहोस् ।
गुलाबका फूलको रङहरुको बिषेशताहरु के के छन् ?
गुलावको फूलका रङहरु पनि आआफ्नै विशेषता छन् । रातो गुलावले एकदमै गाढा प्रेममा रहेको जनाउन्छ । यदि कसैले रातो गुलाब सहर्ष स्वीकारे उ तपाइँको प्रेममा मदहोस छ भनेर बुझिन्छ । पहेलो रङको गु्लाबको फूल भर्खर सुरु भएको मायामा लागू हुन्छ । कुनै साथीलाई मन पराइएको छ तर अभिब्यक्त गर्न सकिएको छैन भने पहेलो गुलावबाट सुरु गर्नुहोस । पहेलो गुलाव दिनुको अर्थ निकटता जनाउनु र कसैलाइ केयर गर्छू भन्ने हो । यसले मित्रताको सुत्रलाइ सुरुवात गरेको बुझिन्छ जुन पछि प्रेममा बदलिन्छ । सेतो गुलावले पवित्र सम्बन्धलाइ जनाउँछ जुन तपाइले जो सुकैलाइ जतिवेला पनि दिन सक्नुहुन्छ । तपाइँ कालो गुलाव भने प्रयोग नगर्नुहोस् किनकि कालो गुलाव पीडाको संकेत हो ।
अन्तमा, प्रणय दिवसको तयारीमा रहेका सम्पूर्ण प्रेमीहरुलाइ अग्रिम शुभकामना । संसार मायामा अडिएको छ । अनि, माया संसारमा ।
विभिन्न अनलाइनहरुको सहयोगमा ।